Madaxweynaha dowladda Puntland oo dib ugu soo laabtay Garowe – Radio Daljir
Madaxweynaha dowladda Puntland oo dib ugu soo laabtay Garowe
Maajo 16, 2015 3:55 b 0
Sabti, May 16, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha d0wladda Puntland Dr. Cabdweli Maxamed Cali Gaas ayaa faahfaahin ka bixiyay safarkii shaqo ee uu kagasoo laabtay dalka dibadiisa
Madaxweynaha oo saxaafada kula hadlay xarunta madaxtooyada, ayaa sheegay inay u baxeen sidii horumarin deg deg ah loogu samayn lahaa kaabayaasha dhaqaalaha Puntland si loo horumariyo wax soo saarka dalka iyo shaqo abuurka.
Wuxuu sheegay madaxweynuhu inuu dalka Talyaaniga kalasoo hadlay sidii loo kordhin lahaa mashaariicda horumarineed ee dowladda Talyaanigu ka wada Puntland. isagoo sheegay inuu lasoo kulmay wasiirka arrimaha dibada iyo madax katirsan barlamaanka dalkaas, kuwaas oo uu sheegay inay soo dhoweeyeen codsiga Puntland.
” Madaxda wadanka Talyaaniga waxaan kawada hadalnay in mashaariicda ay wadanka ka fuliyeen sii laba jibaaraan oo mashaariic kale oo horleh ay ka fuliyaan Puntland insha,allah waan rajaynaynaa in wada hadalkayagu mira dhalo ” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweynuhu Puntland ayaa sidoo kale sheegay inuu tagay dalka iskutaga Imaaraatka carabta, halkaas oo uu sheegay inuu kalasoo hadlay mas’uuliyiinta dalkaas sidii Puntland looga taageeri lahaa is badalka horumarka Puntland. Wuxuu sidoo kale sheegay inay lasoo kulmeen shirkado badan oo diyaar u ah inay maalgashadaan Puntland.
Bandowgii Saarnaa Gobolka Waqooyi-bari Kenya oo BIL lagu Daray
Gabdho horey u sheegay in ay ka Baxayaan Daacish oo wali ku sugan Syria